အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အခြေခံပညာအဆင့်နေအိမ်အခြေပြုသင်ယူခြင်… – PVTV Myanmar
·5months ago ·32 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အခြေခံပညာအဆင့်နေအိမ်အခြေပြုသင်ယူခြင်း (Home-Based Learning) အစီအစဉ်တွင် သင်ယူပါဝင်လိုသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများနှင့် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူများသည် အောက်ပါလင့်တွင် အမည်စာရင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရှေ့ဆက်သွားမည့် ပညာရေးနည်းပညာကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက် ရယူကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်မရရှိသောဒေသများတွင် နေထိုင်သူများနှင့် စာရင်းထည့်သွင်းရန် နည်းပညာအခက်အခဲရှိသူများအနေဖြင့်လည်း အမည်စာရင်း မထည့်သွင်းနိုင်ပါက စိတ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ဘဲ သင်ခန်းစာများကို ရယူသင်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်လွှင့်မည့် အခြေခံပညာအဆင့် နေအိမ်အခြေပြုသင်ယူခြင်း (Home-Based Learning) သင်ခန်းစာ ရင်းမြစ်များကို ကလေးအားလုံးပညာသင်ယူခွင့် (Right to Education) ရရှိစေရန်အတွက် မည်သူမဆို ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။
အင်တာနက်မရှိသောဒေသများသို့လည်း သင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်များရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆက်လက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်ရရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူများအနေဖြင့်
ယခုလင့်တွင် စာရင်းဝင်ရောက်ဖြည့်သွင်း ကူညီပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းပန်ကြားအပ်ပါသည်။
စာရင်းဝင်ရောက်ဖြည့်သွင်းရန် > https://register-moe.nugmyanmar.org/basic-form
#MOENUG #HomeBasedLearning #Myanmar
Like – 8.6K Share – 1394
၂၇၃ ရက်မြောက် သွေးမအေးတဲ့ရွေနွယ်
ခရစ္စမတ်နေ့အထိမ်းအမှတ် NUG အစိုးရ နှုတ်ခွန်းသဝဏ်လွှာပေးပို့
စိုင္း သီဟ says:
2021-08-17 at 3:49 PM
အေကာင္းမြန္ဆုံးပညာေရး logo watermarkေလးနဲ႔ဆိုေတာ့ link အတုအစစ္ အလြယ္တကူသိနိုင္ၿပီေပါ့ စကစေရ ငိုစမ္း
2021-08-17 at 5:37 PM
2021-08-17 at 9:29 PM
Rina Soro Rina says:
2021-08-17 at 9:36 PM
Chit Thae says:
2021-08-17 at 10:32 PM
2021-08-17 at 11:14 PM
Freeman Dnu says:
2021-08-17 at 11:23 PM
2021-08-17 at 11:29 PM
ညီမလေးက ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်အတွက်ကမတင်ရသေးတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင့် အဆင်မြင့်ပညာရေး‌ေလျှာက်ရမလား အခြေခံပညာ‌ေလျှာက်ရမှာလား
ဘစ်ကဘန်းကမ်းဘတ်လာမှ နိမ်းပြန်ချိန်းမယ် says:
2021-08-18 at 7:00 AM
တက်တဲ့ကျောင်းသားနာမည်မှာ Eng ဘာသာနဲ့ ရေးလိုက်မိရင်၊ ပြန်ပြီး စာရင်းထပ်ပေးရမှာလား? စာရင်းသွင်းအောင်မြင်ကြောင်း စာတော့ရောက်ပြီးပြီရှင့်🤧
Thet Htoo Zaw says:
Khin Hla Htwe says:
2021-08-18 at 12:18 PM
eng လိုရေးပြီးတင်လိုက်မိလို့ မြန်မာလိုရေးပြီးအသစ်တင်ရမလား
Zin Hla Htwe says:
2021-08-18 at 1:10 PM
Link ကဝင်မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ကူညီကြပါဦး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်
2021-08-18 at 1:24 PM
စာရင်းပေးသွင်းပြီး လက်ခံကိုscreen shot မရိုက်ထားမိလိုက်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်
2021-08-18 at 1:44 PM
Mtun Tun says:
2021-08-18 at 5:05 PM
2021-08-18 at 5:18 PM
2021-08-18 at 5:26 PM
မအလမွာအခ်ား လုပ္စရာ မရွိေတာ့ဘူ ျပည္သူေတြကို ရုပ္တဲ႕ အလုပ္လြဲလို့ အခ်ားဘာအလုပ္မွမရွိပါ
Myint Than Htun says:
2021-08-18 at 9:13 PM
NUG ရဲ ့ပညာေရး အခုကာလမွာ အေကာင္းဆုံးနဲ ့ေက်ာင္းသား/သူေတြသင္ယူတတ္ေျမာက္ပါေစ
ThuZar Thant says:
computer မရွိလည္းသင္လို႕ရလား ဒုတိယတန္းတတ္မွာပါ
Maya Min says:
Ã M Míñ says:
2021-08-19 at 2:38 PM
Mone Ma Ma says:
ဗုဒၶဟူး သား says:
2021-08-20 at 9:26 AM
Yi Bo says:
2021-08-20 at 8:44 PM
2021-08-21 at 10:46 AM
ဒုတိယနှစ်တက်လက်စ သမားတွေဆို ဒုတိယနှစ်ပဲ ထည့်ရမှာလား ကိုယ်တက်ရမယ့် တတိယနှစ်ကို ရွေးရမှာလားဆရာ?
ဖောင်ဖြည့်ပြီးလို့ summit ကိုနှိပ်လိုက်တာ autoလုပ်ဆောင်မှာလားမေးလို့okနှိပ်လိုက်တာဘာမှပြန်ကျမလာဘူးအဲ့ဒါဆိုလုပ်ဆောင်ချက်မအောင်မြင်တာလားရှင့်
Min Thura Aung says:
2021-08-22 at 6:07 PM
သင်တန်းစမဲ့ရက်နဲ့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သင်ယူရမလဲသိချင်ပါတယ်ဗျ ကျောင်းတော့အပ်ပြီးပါပြီ
Hlaing Htet says:
2021-08-24 at 5:49 PM
မောင်မင်းထက်ဇော် အမည်နဲ ့စရင်းပေးသွင်းထားပါတယ်ရှင့် ရမရသိချင်လို ့ပါရှင့် မအောင်မြင်သေး ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ grade. 3. ပါရှင့်
Lin Su Wai says:
2021-08-26 at 9:55 AM
စံ မမီ says:
2021-08-28 at 8:54 PM